Wararka - Booqashada Macmiilka reer Congo ee Mashiinka Buuxinta
Weli Mashiinka Buuxinta Biyaha
Mashiinka buuxinta biyo dhalaalaya
Mashiinka Buuxinta Biyaha Dhalada
Mashiinka Yar ee Mashiinka Buuxinta Biyaha
3-5L Mashiinka Buuxinta
5 Mashiinka Buuxinta Biyaha
mashiinka buuxinta kaarboon kaarboon
Mashiinka buuxinta cabitaanka aan kaarboon lahayn
Mashiinka buuxinta cabitaanka tamarta
Khadka Cuntada Cunista Casiirka
Khadka mashiinka buuxinta casiirka dhalada ee PET
Mashiinka Buuxinta Khamriga Beer
Mashiinka Buuxinta Dhalada Beerka ah
Khadka mashiinka buuxinta Dhalada Dhalada
Khadka Mashiinka Buuxinta Saliida
Khadka mashiinka xoqida
Khadka mashiinka buuxinta saliida muhiimka ah
Daaweynta biyaha & Pasteurizer
nidaamka daaweynta biyaha
Mashiinka buuxinta cuntada
Khadka Mashiinka Buuxinta Malabka
Mashiinka Buuxinta Dawooyinka
Mashiinka Buuxinta Sharoobada
Mashiinka Buuxinta Cosmetics
Khadka Mashiinka Buuxinta Shaambo
Mashiinka Buuxinta Kiimikada
Mashiinka Buuxinta Koobka Kiimikada
Mashiinka Khadka Tooska ah ee Tooska ah
Mashiinka Mashiinka Kootada otomaatiga ah
Dhalada Wareega Labeler Labeler HAY
Top Label Label Mashiinka HAP Taxanaha
Labeler-ka hore iyo gadaal WAA Taxane
Dayactir Labeler Laberler Labeler HDY Taxanaha
Horizontal Labeler Labeler HAW Taxanaha
Booqashada Macmiilka reer Congo ee Mashiinka Buuxinta
Intii lagu gudajiray Shirweynihii Labaad ee Soo-dhoweynta Caalamiga ah ee Shiinaha bishii Nofeembar, wafdiga Afrikaanka ah ee 2019 waxay gaareen Shanghai iyagoo ka yimid Congo, Koonfur Afrika. Milkiilayaashu waxay booqdeen oo hubiyeen mashiinnada ay dalbadaan, warshaddeennu waa furaha mashiinka wax buuxiya ee jadwalkooda.
Annaga, Higee Makiinado, soo saare waxsoosaar ku saleysan, oo leh ku dhowaad 20 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan buuxinta, xiritaanka, calaamadeynta iyo khadka mashiinka wax lagu duubo ee noocyada kala duwan. Waxaan nahay xirfadle hal joogsi bixiyaha xalka khadka buuxinta. Safarkooda ganacsi, macmiilkeennu wuxuu la tashaday nidaamka daaweynta kahor, oo ay kujiraan filterka ciidda quartz, filterka kaarboon firfircoon, nidaamka RO, nadiifiye Ozone, haanta biyaha. Waxay sidoo kale tijaabiyeen socodsiinta 3-da 1 ee monoblock cola, buuxinta iyo qadka mashiinka. Ugu dambayntii waxaannu leenahay kulan ku saabsan iibka ka dib, maalinta rarka, muddada lacag bixinta iyo suuq ku saabsan iibinta khadka wax soo saarka biyaha dhalooyinka ku jira ee Afrika.
Waxaa jira qayb ka mid ah Warka ka socda wafdiga Afrikaanka ah ee jooga Congo oo ay dowladdu ka mamnuucday soo-saaraha suuqa maxalliga ah inuu soo saaro biyo sachet ah.
Mashiinka buuxinta iyo mashiinka wax lagu duubo ee Sachet waa soosaar kulul oo ka jira aagaga kale ee Afrika hadda, laakiin waxay u baahan yihiin inay ka fikiraan sidii ay u dhisi lahaayeen khad cusub oo biyo soo saaraya mustaqbalka.
Wefti ka socda Afrika ayaa daahfuray mishiinka ku habboon, ku raaxaysta cuntada Shiinaha, daawashada mishiinka tijaabinaya. Waxay ku ammaanaan sare qaabkeenna wanaagsan iyo khibradda maaraynta 5S inta ay booqanayaan aqoon isweydaarsigayaga, qolka shirarka, waaxda wax soo saarka, bakhaarka iyo maareynta goobta. Waxaan sidoo kale ku faaneynaa tayada wax soosaarka oo aan ku qadarinaynaa iskaashiga midba midka kale. Higee Mashiinnada, doorashadaada wanaagsan ee dhammaan noocyada cabitaanka, cabbitaanka iyo xiritaanka buuxinta biyaha, calaamadeynta iyo khadka baakadaha. Ku soo dhawow na Booqo! Waxaan had iyo jeer halkan u joognaa inaan ku sugno!
Waqtiga dhejinta: Dec-18-2019
Higee Makiinado (Shanghai) Co., Ltd.